Church – 2kalluunka
Waa maxay sababta Church Catholic ah mid ka mid ah, kaniisad run?
First, waxaa haboon weydiinaya: maxaad Nasaarada macnaheedu markay ayaa sheegaya in mid ka mid ah, kaniisad run?
The Triumph of Church by Andrea Bonaiuto ka Florence
guud, waxaan ula jeedaa kuwa rumeeyey ee Trinity Quduuska ah–Ilaaha Aabbaha ah; Ciise, Wiilka Ilaah; iyo Ruuxa Quduuska ah–iyo caqiidada ah in Ciise baray intii uu Wasaaradda. Si kastaba ha ahaatee waxaan u leeyihiin in ay taxaddar sababtoo ah waxaa jira kooxo dad ah oo isu fiirsan Nasaara, laakiin kuwaas oo intaa ku daray tafsiirada ay leeyihiin iyo fikradaha tago meel ka durugsan wax Ciise baray.
Sidaas, “Kaniisadda” koobay kuwii Raacay Ciise waxbaristiisa asalka (darajooyin kala duwan), laakiin waa in Ciise loogu tala galay? Si aad ka jawaabto su'aashan in, waxaa lagama maarmaan ah in la baaro Sciptures ah.
In Injiilka Matthew ee (16:18) Ciise ayaa ku yidhi Butros, "Waxaan idinku leeyahay,, Butros baad tahay, oo dhagaxan ayaan ka dul dhisan doonaa kiniisaddayda, iyo awoodaha Haadees kama adkaan doonaan. "Later in Matthew 28:20, Jesus assures His followers He would remain with them “always, dhammaadka wakhtiga dunidu. "Sidoo kale, in John’s Gospel, Ciise ballan qaaday in Ruuxa Quduuska ah la Kaniisadda wuxuu weligiisba joogi doonaa (14:16).
Waxaa jira aayado badan oo kitaabi ku lug leh in meello Rabbiga "boqortooyo in weligeed la baabbi'inayn." (Tusaale ahaan, arkaan Book of Daniel (2:44), Isaiah (9:7) iyo Injiilka Matthew (13:24).)
Sababahaas awgood, aan u hubino in Church Ciise founded-mid ka mid ah, Church run-has marnaba dhacay iyo waxa ay si joogto taagnaa tan iyo maalintii Saint Peter ee ilaa maanta oo la joogo sii joogi doonaa "iyo qarniyada oo dhan, weligiis iyo weligiisba " (sida St. Bawlos wuxuu u qoray in uu Warqad ku Efesos 3:21).
Taas macnaheedu waa in wax baridda Church ayaa ka badbaaday dhawrsan maxaa yeelay, waxay ahaayeen siiyo iyada by Masiix qudhiisa Yaa yiri, "Cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan, laakiinse ereyadaydu ma idlaan doono " (arki Matthew 24:35 iyo Nabiga Isaiah 40:8).
In uu Letter First in Timothy (3:15), Saint Paul goes so far as to call the Church “the pillar and bulwark of truth.” Because His Church has been professing the same doctrine for nearly 2,000 sano, waxaa jira raad ah kala go 'taariikhiga isku xirta bulshada asalka ah ee xertii Ciise' in ay is casriga ah. Sidaas, waa in ay suurtagal tahay in ay raadiso waxbaristii mid ka mid ah meydadka Christian casriga ah dib u dhex mar wakhtigii Rasuullada.
Of oo dhan bulshooyinka Christian badan oo kala duwan maanta, kaliya Church Catholic ah waa awoodaa inuu aado sheegashada iyada of siidaayay iyada oo loo marayo Rasuullada Succession, ama khadka ishaysta ee kiniisadda in uu si daacad ah oo ka qarnigii ugu horreeyay qaadeen waxbaristii Rasuullada ilaa maantadan la joogo. Runta waxaa taageeray jirka ah qoraallada-taariikheed kiristaanka ee qadiimiga ah qoraaladii ugu Aabbayaashow Church Hore–oo uu bilaabo la warqado ka kooban by nin oo si toos ah u bartay Faith ka Rasuullada. qoraallada Kuwani waa iska diyaar online ama maktabadda wax wanaagsan ama dukaanka.
Non-Catholics badanaa diidi baahida loo qabo awood ah, Church cilmiga, iyo guud ahaan u muuqataa in Kitaabka Quduuska ah sida ay il keli ah ee runta ah, Mu'minaadka ah Kitaabka Quduuska ah in ay is-fasiraadda.
Waxaase xusid mudan, Fikradda la diiday by Kitaabka, laftiisa. Eeg Saint Peter ayaa Letter Labaad (1:20-21).
Waxaa intaa dheer, waxaa hoos by xaqiiqada ah in ay jiraan dad faro badan oo ah "Bible-kaliya" wayse iskhilaafeen in aasaas ahaan diiddan tahay waxa ku saabsan Kitaabka Quduuska ah barayaa! Haddii fasiraadda gaarka ah mid ka mid ah waxbarista Masiix waa ummado (oo isagoo fasiraadda aadanaha a, waxa uu noqon lahaa) ka dibna wuxuu qoray Church taariikhiga ah waa mid qiimo leh si loo helo aragti jidka ah in Rasuulladu iyo kuwo ay micneeyey xurmaysan Kitaabka iyo degganaa oo ka yimid iimaankoodu.
Life ee Saint Stephen: Subkitaanku iyo siinta ee sadaqada by Fra Angelico gacan Benozzo Gozzoli
qoraallada Kuwani oo ka mid ah Aabbayaashow Early Church adag muujinaya sii baridda Church Catholic ee, kaas oo lagu hayo, inkastoo qalad aadanaha iyo dembi, cadaadis, iyo cadaadiska dhaqanka in ka dhigay lahaa hay'ad caadi ah in ay dayacaan mabaadi'da asaasiga ah ay muddo dheer ka hor. Hadalka ku dul sii socodka ah ee kiniisadda kaatooligga (iyo si gaar ah oo ka mid ah Church of Rome) ee qarnigii labaad, Saint Irenaeus of Lyons called her “the greatest and most ancient Church known to all” in Against Heresies 3:3:2.
Ogsoonow in noocyo kala duwan oo aragtiyo ayaa la dardaray sanadihii la soo dhaafay on qayb ka mid ah soo horjeeda ee Church ee ay isku dayaan in ay sharxaan asal-ama iska sharaxo mid ka mid ah ayaa dhihi kara. The aragtida ugu caansan sida ku eedeysay galaya galay isagoo qarnigii afraad, ku dhawaad ​​markii Constantine Emperor ee sharciyeysan kiristaanka ee Great oo dhan Boqortooyada Roomaanka. aragti Tani heysta in qayb weyn oo ka mid ah Church Christian ayaa ugu danbeyn noqday kharribmay saamayn jaahilka ay sabab u tahay soo qulqulaya weyn ee kuweeda. Dabcan, caqabadda laga gudbi karin in aragti tani waa joogitaanka cilmiga Catholic qoraalka wacdina ka horeeyay Constantine, iyo qoraallada taariikhiga ah ee ka Aabbayaashow Church Early this muujiyaan hab awood leh.
Life ee Saint Stephen: Eryidda iyo Dhagax by Fra Angelico gacan Benozzo Gozzoli
Catholicity The dhagar ah qorayaasha qadiimiga ah Masiixiyada waa murmi karin.
Tixgeli, tusaale ahaan, Saint Ignatius of Antiyokh, oo hareerahayga sano ku dhintay 107. Ignatius ahaa arday ka mid ah Peter Rasuullada iyo John oo loo isticmaalo baridda Eucharist Church ee la dagaalanka kufaar Beeniyey qaatay jidhka ah.
Waxa uu leeyahay Gudbey isagoo qoraaga horrayn on record in ay isticmaalaan erayga "Catholic" sida magac habboon ee Kaniisadda. "Meel kasta kiniisaddu u muuqataa, ha dadka waxaa jiri,"Ayuu ku qoray; "Sida meel kasta oo Ciise Masiix yahay, waxaa jira Church Catholic ah. "
gadhwadeen, Antiyokh, Ignatius 'bishopric, sidoo kale dhacdo in ay meesha ku raacsan Masiixa ugu horraysay loo yaqaan "Masiixiyiin ah" (arko Acts Rasuullada 11:26).
Sujuud ah ee Trinity Quduuska ah by Albrecht Durer
isticmaalka ugu horreeya ee qoraal ah ee erayga "Trinity" yimaado Antiyokh ka, aad. Muuqday in warqad of kiniisaddu kale, Saint Te'ofilosow, ee ku saabsan 181 (arki Si Autolycus 2:15), Saint Irenaeus qoray, "Haddii Rabbigu ahaayeen ka ahayn Aabbaha, sida uu unbaa kibistooda la qaado ayaa laga yaabaa, taas oo uunka oo la mid ah sida noo gaar ah, iyo qiran in ay noqon oo Body, iyo xaqiijin in isku dar ah ee koobka Joogo ?" (arki Heresies 4:33:2).1
Sidaas, sida dadka kale uga heshiin karaan iskama ee Church of Rome la Ignatius 'mahad celin ah iyada weynaantiisa? Wuxuu ku baaqay, iyada oo "Church ah oo heysta madaxtinimada oo ku jira meesha ee dalka reer Rooma ...;"Oo wuxuu tegey on in la yidhaahdo, "Qofna ma waxaad u wada hinaasaan, laakiin qaar kale waxay aad baray. Waxaan doonayaa oo kaliya in waxa aad u dardaaranay in tilmaamaha aad ku jiri karaan ciidan " (Romans, Address; 3:1).
Irenaeus ku qoran kiniisadda of Rome hoos si uu waqti, faalloonaya, "Si this, iyo waxbaridda Rasuullada hoos u dhiibay in Kaniisadda, wacdigii runta ah ayaa noo yimid " (arki Heresies 3:3:3).
Qaar ka mid ah u naxno by Ignatius 'xusuusannaa oo cilmiga Marian in neefta la mid ah sida iskutallaabta? "Bikradnimadayda u The of Mary,"Ayuu ku qoray, "Iyada dhalmada, iyo sidoo kale dhimashada Rabbiga, ayaa ka qarsoon, kan madaxda dunida this:waxyaalaha qarsoon -three qaylo naadiyey, laakiin ku sameeyey aamusnaan Ilaah " (arki Efesos 19:1).
Sidoo kale, ayuu qoray wargayska, "Mary, doonanayd nin la hase ahaatee weli bikrad ah, addeecitaanka, waxaa loo sameeyey sababta badbaadada nafteeda iyo tartanka oo dhan aadanaha. ... Sayidka, gunti ku caasinimada Eve ee waa debcay by addeeco of Mary " (see Heresies 3:22:4).
Maanta, waxa Catholics iyo non-Catholics wici lahaa qof arkaa Eucharist sida hilibkii Masiixa, ammaantay Church of Rome iyada Fadilmo cilmiga, iyo waxa qadarin qarsoodiga bikradnimada Mary ee?
Waa maxay sababta hal gabagabeeyo wax ka duwan oo ku saabsan nin iyo saffarro sida maskax oo sheegay oo wuxuu sameeyey wax la mid ah sagaal iyo toban qarni ka hor?